के गर्नु पर्छ एनआरएन अमेरिकाले ?
अहिलेको एनआरएन विश्वका ७५ देशमा गठन भएका छन्। तीमध्ये सदस्यताका संख्याले सबैभन्दा ठूलो हो, एनआरएन अमेरिका। बल्लतल्ल करिब १७,००० सदस्य पुर्‍याइएको एनआरएन सदस्यमध्ये अमेरिकामा मात्रै १०,६०० हाराहारी सदस्य छन्। यो गत २०१५-१७ का लागि भएको निर्वाचनको तथ्याङ्क हो। २००७-०९ मा निकै कम सदस्य सङ्ख्या रहेको एनआरएन अमेरिकामा २००९-१० सम्म आईपुग्दा २८० को हारीहारीमा सदस्य पुगेका थिए। बिस्तारै सदस्य थपिदै गएर २०१३-१५ मा आइपुग्दा करिब ३,८०० पुगेका थिए।
यो भनेको अमेरिकामा बसोबास गर्ने कुल नेपालीको ४ प्रतिशत पनि होइन। पछिल्लो अध्ययनले अमेरिकामा करिब २ लाख ५१ हजार नेपाली रहेको तथ्य बताउँछ। त्यसमा वैद्यानिक रुपमा अमेरिकामा ग्रिनकार्ड र नागरिकता लिएर बसेका नेपाली भने आधा जति हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। धेरै वैद्यानिक रुपमै बसेको भए पनि कुनै पनि संगठनमा खुलेर भने लागेको पाँइदैन। धेरै नेपालीहरु नेपाली समाजमै आउन चाहँदैनन्। यस्ता सबै आप्रबासी जोड्दा करिब ३ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु अमेरिकामा रहेको बताइन्छ।
केही गर्न खोज्यो किन गर्छस् भन्छन्। केहि गरेन किन नगरेको, किन चुप लागेको भन्छन्। हैन, कसो चाहिँ गर्ने? अब हाम्रो यस किसिमको सोच परिवर्तन गर्नै पर्छ। हाम्रो सोचलाई माथि लैजानै पर्छ। तर, गुट उपगुट भएर होइन सबै मिलेर साझा रुपमा समाजमा केही त गर्नै पर्छ ताकि साह्रोगाह्रो पर्दा त्यो साझा संस्था हरेक समुदायका सबै नागरिकलाई काम लाग्न सकोस्। यस्तो संस्था कुन समुदायको लागि अपरिहार्य नहोला र? तर बिडम्बना यस्ता संस्था निकै कम छन् समुदायमा।
देशमा पाङ्दुरे राजनीतिले न देश छाडी जानु न गरी खानु न मरीजानु भएका छन् जनता। त्यही राजनीति यहाँ प्रवासमा पनि हरेक क्षेत्र क्षेत्रमा गरेपछि कसले मन पराउँछ र? त्यही राजनीतिबाट व्याकुल भएर यहाँ कर्मभूमिसम्म आउन सकेकाहरु अलि शान्तिको सास फेरेर बसेको छन् । अनि यहाँ प्रवासमा पनि त्यही जन्मभूमिको त्यही दूषित राजनीतिमा होमिनु भनेको हामी आफैंमा विभाजित हुनु हो। विचारको विभाजनले सबै विभाजन हुन्छ। हेक्का राख्नु पर्ने कुरा यही हो।
आप्रबासी जो हुन् प्रायः सबैको चाहना एउटै छ, त्यो हो एनआरएनलाई नेपाली दूषित राजनीतिबाट टाढा राखेर अगाडि बढाउने। सबैको भन्न लायकको साझा संस्था बनाउने। कथंकदाचित् यस्तो भयो भने हरेक देशमा (एनआरएन गठन भएका वर्तमान ७५ देशमा) त्यहाँ भएका नेपालीहरुको दुईतिहाईभन्दा धैरै यो संस्थामा स्वस्फुर्त रुपमा आउने छन् न कि अहिले अमेरिकाको एनआरएन (२०१७-२०१९) निर्वाचनको लागि 'म उम्मेद्वार उठेको छु प्लिज मेरै लागी, भोटकै लागी भए पनि सदस्य बनिदिनु पर्‍यो भनी हारगुहार गर्ने स्थिति आउँछ।
एनआरएनलाई गैह्र-राजनीतिक संगठन बनाउन अहिले एनआरएनमा रहेकै व्यक्तिहरुबाट थालनी गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। समाजका भएका आशलाग्दा स्वतन्त्र व्यक्तिहहरुलाई यो संस्थाको अगुवा बनाउँदा अति उत्तम हुनेछ। कोही व्यक्ति कुनै राजनीतिक संगठनमा छ भने त्यस्तालाई यो एनआरएन संस्थामा हालीमुहाली हुन दिनु पटक्कै हुँदैन। राजनीति गर्नु भनेको पनि समाजसेवा हो, त्यही संस्थाबाट समाजसेवा गरे भइहाल्यो नी। किन एउटै व्यक्ति दर्जन संस्थामा बस्नु पर्‍यो र?
एनआरएनले जुन देशको हो त्यहीँ केन्द्रित भएर केही कुरा तत्काल गर्न सके त्यहाँका जनतामा संस्थाप्रतिको आस्था र भरोसा बढ्न सक्छ। जस्तै प्रवासीहरुको बहुल्यता रहेका सहरहरुमा निम्न काम गर्न सकिन्छः
-कम्युनिटी सेन्टर खोल्ने
-कल्चर सेन्टर खोल्ने
-भैपरी आउने समस्याका लागि आपतकालीन कोषको स्थापना गर्ने न कि अहिले जस्तो समस्या आएपछि हारगुहार गर्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा हात फैलाउनु परोस्।
-दोस्रो पुस्ताको लागि नेपाली भाषा, कला, साहित्य र संस्कृति सिकाउनको लागी जनबाहुल्य रहेका सहरहरुमा कक्षाहरु स्थापना गर्न त्यहाँका स्थानीय संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने।
-एनआरएनले जहाँको हो त्यहीँ केन्द्रीत भएर समाजसेवा गर्नु जरुरी छ।
यसो गर्न सकियो भने यो संस्थाको गरिमा बढ्छ सक्छ। र, स्वस्फुर्त रुपमा नेपालीहरु यो संस्थामा गोलाकार भएर आउन सक्छन्। अझै यो सिर्जनाले भनेजस्तै भयो भने कति राम्रो हुने थियो-
एनआरएन सबैको घर हुनुपर्छ
घरको सबै अटाउने भर हुनुपर्छ
धर्म,कर्म,पार्टी र जातिमा नलडौं,
प्रवासीमा एउटै नेपाली थर हुनुपर्छ
अहिले एनआरएन अमेरिकामा भइरहेको बेथिति र संस्कारलाई भत्काउन सबैजनाले आवाज उठाउनै पर्छ। संस्थालाई सुमार्गमा लैजान दुरदृष्टि राख्नै पर्छ। संस्थाभित्र केही राजनीतिक पार्टीका गुट र उपगुट र कुसंस्कारको ठूलो खाडल खनिइरहेको छ, त्यसलाई निस्तेज पार्नै पर्छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन ८, २०७४, ०१:०५:५८